သူကောငျး ကိုကောငျး – My Blog
ကြှနျတျော နာမညျအောငျခမျြးသာဖွဈပွီး အသကျကတော့ ၂၂နှဈပါ ကြှနျတျောဟာ ငယျငယျကတညျးကရပျကှကျထဲက အကွီးတှအေရကျသမားတခြို့တှနေဲ့ပေါငျး ပွီးငယျငယျကတညျးကဆေးလိပျသောကျ အရကျသောကျ ဖာခြ နဲ့အခြိနျကုနျလှနျလာသူဖွဈပါတယျ ..ငယျဘဝဆေးလိပျကှမျးအရကျကို၁၇နှဈလောကျကတညျးက စသုံးလာတဲ့အတှကျကွောငျ့ ရူနာရိူကျကုနျးပုံစံဖွဈကာ အသိမိုကျကာ ဆိုးသှမျးနမေိပါတယျ….သူငယျခငျြးတှလောချေါလြှငျအရကျဝိုငျး အသုဘအိမျဖဲဝိုငျး တခါတလေ တံတားအောကျဖာခေါငျးမြားနဲ့ပေါငျးကာ ဖာခလြိုကျနဲ့မိဘအပျေါမသိတတျမလိမျမာ ဘုရားတရားမသိနဲ့ အခြိနျကုနျလကျြရှိပါသညျ။ ထိုစဉျ ကြှနျတျောဧ။ျဘဝကိုပွောငျးလဲပေးသောသူမှာ ဦးဇယေဆြိုသော အသကျ၅၆နှဈခနျ့လူကွီးတဈဦးဖွဈသညျ။သူသညျ စံပွဈေးအနီးနား စီမံကိနျးတှငျနထေိုငျပွီးကနျြးမာရေးအရ ပငျစငျစားတဈဦးဖွဈသညျ ။
ကြှနျတျောငမိုးရိပျခြောငျးတဖကျကမျး ထနျးရညျသှားသောကျပွီးအပွနျတှငျမူး ပွီး၇ဆူဘုရားအနီးအရိပျရခုံတဈခုတှငျထိုငျနရော ဦးဇယေမြှာလညျး ထိုနားက ဘုနျးကွီးကြောငျးတဈကြောငျးသို့လာရာမှ ဆုံဖွဈရာ အသိမိတျဆှဖွေဈသှားခဲ့ကွပါတယျ ထို့နောကျကြှနျတျောဟာအားလပျရပျသူ့ဆီသှားကာ သူအပွောမြားနားထောငျကာ အပငျြးပွစေကားသှားပွောလရှေိ့ပါတယျ တနနေ့လေ့ညျခငျးတခြိနျ မိုးရှာနစေဉျ မိမိမှာပငျြးလှနျးသောကွောငျ့ ဦးဇယေဆြီသှားမယျဆိုကာ ဘတျဈစီးကာထှကျလာခဲ့ပါတယျ…ဘတျဈမှာလူအငျမတနျမှကွပျ၍ စပယျယာမှ… အနောကျကလေးကိုတိုးပေးကွပါဦးခငျမြ နရောအလှတျတှရှေိပါတယျ…ဆို၍ ကြှနျတျောလညျးတိုး၍ တိုး၍အသကျ၂၅နှဈခနျ့ ခန်ဓာကိုယျပွညျ့ပွညျ့ကောငျမလေးတဈယောကျနောကျသို့ရောကျသှားလတေော့တယျ ကြှနျတျောလညျးပထမတှငျစိတျမပါသျောလညျး ကောငျမလေးဆီကရသောကိုယျသငျးနံနှငျ့ လူတိုးသောကွောငျ့ သူဧ။ျတငျပါးနဲ့ထိသော အတှကွေ့ောငျ့ ညီတျောမောငျမှာတောငျတကျလာပါတော့တယျ…ကြှနျတျောလညျး တောငျနသေောကွောငျ့ လူကလညျးကွပျ မထိ တထိ တို့ကွညျ့ရာကောငျမလေးမှာနောကျလှညျ့ကွညျ့ကာ နှူတျခမျးကိုကိုကျကာပွနျလှနျ့သှားပါတော့တယျ…ကြှနျတျောလညျးဘာမှမပွော၍ လီးနှငျ့ သူဧ။ျဖငျပေါကျရှိရာနရောမှနျးကာ ပှတျနမေိတော့တယျ….
လီးနှငျ့သူဧ။ျထဘီနှငျ့ထိသော ပှတျနမေိသော အရသာမှာတဈမြိုးတဖုံထူးဆနျး၍ ဖီးအလှနျအငျမတနျမှရနမေိတော့တယျ….. ဘရိတျအုပျရငျဖငျကိုဆောငျ့ထညျ့လိုကျ ပွီးလညျပငျးကနေ ကိုယျသငျးနံလေးရူလိုကျနဲ့အခြိနျကုနျမှနျးမသိကုနျနမေိပါတော့တယျ…ထိုစဉျ စီမံကိနျး ပါလားဟေ့…. ထိုမှကြှနျတျောလညျး သတိရကာ ပါတယျဗြို့ ပါတယျ ဆိုကာတဈခကျြထပျဆောငျ့ကာ အှတျ အှတျ …ထို့နောကျဆငျးလာခဲ့ပါတော့တယျ ထို့နောကျ ဦးဇယေအြိမျရောကျတော့စကားစမွညျပွောရငျးထိုအကွောငျးပွောမိသောအခါ ဦးဇယေကြ……ဟာ ငါ့တူရယျ့ မငျးမှားပွီ မငျးဘာလို့အဲ့လိုလိုကျထောကျတာလုပျရတာလဲ ဦးလေးကလညျးဗြာ သူတောငျကွိုကျလို့ ငွိမျခံနတောကိုဗြ ဟ မငျးကိုဘယျသူကွိုကျတယျပွောလဲ အဲ့ဒါရှကျလို့ကှ မွနျမာမိနျးကလေးတှကေ မဟုတျတဲ့နရောမှာရှကျတယျ အဲ့လိုဆိုမပွောရဲ မအျောရဲကွဘူး…….. မဟုတျပါဘူးဗြာ နောကျလှညျ့ကွညျ့ အံကွိတျပွီးတောငျပွနျလှနျ့သှားသေးတယျ…. မဟုတျတာကှာ အဲ့ဒါရှကျကွောကျပွီး စိတျညဈနတောကှ မငျးသူကိုမကွညျ့မိဘူးလား ခြှေးတှပွေနျနဲ့အဲ့ဒါ ရှကျစိတျကွောကျစိတျကွောငျ့ကှ မငျးယောကျြားကောငျးဆိုမလုပျရဘူး အဲ့ဒီနရောမှာမငျးအမေ မငျးညီမကိုတခွားကောငျတဈကောငျကနောကျကထောကျနရေငျမငျးဘယျလိုလုပျမလဲ..မငျးသတျပဈမှာမဟုတျလား…. သတျပဈမှာပေါ့ဗြ…
အေးလေ ငါပွောတာအဲ့ဒါ နောကျတဈခါကမြလုပျနဲ့ ကွောကျစိတျ ရှကျစိတျကွောငျ့ ငွိမျခံနတော ကွိုကျလိုမဟုတျဘူး မငျးနောကျတဈခါအောကျတနျးမကနြဲ့ ကိုယျ့အမကေိုယျ့နှမလိုသဘောထား အဲ့လိုလုပျတာတှရေ့ငျတောငျမငျးဝငျပွီးကူညီရမယျဟုတျပွီလား…. ဟုတျကဲ့ပါ ကြှနျတျောမှားသှားတယျနောကျမလုပျတော့ပါဘူး ထို့နောကျကြှနျတျောတို့ စကားစမွညျပွောထမငျးစားကာ အိမျသို့ည၈နာရီလောကျမှပွနျထှကျလာခဲ့ပါတယျ… ကြှနျတျောနှငျ့ကြှနျတျောသူငယျခငျြးမြားဒဂုံဘကျထနျးရညျသှားသောကျသောဆိုငျမှ ပိုငျရှငျမှာမဝငျးဆိုသော အသကျ ၄၅နှဈခနျ့ မုဆိုးမတဈယောကျဖွဈပွီး မဝငျးမှာ ထနျးရညျမှာသောဝိုငျးမြားကိုအမွဲထဘီတိုတိုဝတျ ခန်ဓာကိုယျမှာ အဆီတဝငျးဝငျး ဝ၍အရပျမှာ၅ပေ၎လကျမရှိသညျ့ ကလေး၎ယောကျအမဖွေဈသညျ။ကြှနျတျောမှာငယျစဉျကတညျးက အနျတီမမ မြားကိုစိတျဝငျစားပွီးတမူထူးခွားစှာစိတျပါသောကွောငျ့ မဝငျးဆိုငျရောကျသောအခါမဝငျးကိုလိုကျကွညျ့နမေိလသေညျ။ မဝငျးမှာ ကြှနျတျောဧ။ျအကွညျ့တှကေိုသိပွီး ထနျးရညျသှားသောကျတိုငျးမှာ ပွုံးပွကာ တခါတလေ ကြှနျတျောသေးပေါကျဖို့သှားလြှငျ အိမျသားနားရခြေိုးကနျမှာ ယောငျလညျလညျလုပျလကျြရှိသညျ။
ကြှနျတျောလညျး တခါသူငယျခငျြးမြားနှငျ့ထနျးရညျသောကျကာ ထနျးရညျ၁၀အိုးခနျ့သောကျအပွီးသေးပေါကျခငျြ၍ အိမျသာဘကျထှကျလာခဲ့စဉျ မဝငျးမှာ ရခြေိုးကနျနားတှငျအဝတျကုနျးလြှျောကာ ကြှနျတျောကိုတှသေ့ော ပွုံးပွလကျြရှိသညျ။ ကြှနျတျောလညျးစိတျထလာကာ မဝငျးဖငျကိုလီးဖွငျ့နောကျမှထောကျပှတျကာ မဝငျးရေ ဘာလုပျနတောလဲ မဝငျးမှဖငျကိုနောကျပွနျကော့ပေးပွီး ‘အဝတျလြှျောနတောလေ” ကြှနျတျောလညျးဖီးတကျလာကာ မဝငျးကိုကောကျဖကျကာနို့တှကေိုပှတျကိုငျမှလေိုကျပါတော့တယျ….ဟဲ့ ဟဲ့ အယျ လောလိုကျတာ ကလေးရယျ မရဘူးဗြာ ခဈြခငျြလာပွီ ….ရှတျ ရှတျ … မဝငျးမကျြနှာကိုဆှဲလှညျ့ကအတငျး လြှာထုတျကာကဈဆငျရိုကျပါတော့တယျ.. မဝငျးကလညျးသူလြှာထုတျကာအပွနျအလှနျရမကျစောတကျကာ အပွနျအလှနျနမျးနမေိတော့တယျ ထိုမြှမကမဝငျးဟာကြှနျတျောရဲ့လီးကိုပုဆိုးမှဆုပျကိုငျကာ ကြှနျတျောကလညျးမဝငျးနို့ကိုမှကောနဲ့အပွနျအလှနျရမကျစောထဲ မြှောနမေိတော့တယျ …. ထို့နောကျ အဲ့ တျောတော့ နောကျမှပေါ့ ကလေးရယျ ပေးလုပျမှာပေါ့ နောကျနဆေို့ငျပိတျမယျ မမဆီလာခဲ့နျော ဆိုကာဆိုငျရှကေို့ပွေးထှကျသှားပါတော့တယျ….ကြှနျတျောလညျးအပြျောကွူးကာ ပွနျခါနီးပိုကျဆံရှငျးကာမဝငျးကိုမကျြလုံးမှိတျပွကာ ဦးဇယေဆြီထှကျလာပါတော့တယျ…..
ဦးဇယေကြို ထိုအကွောငျးပွောပွတော့.. ‘အေး ငါအားပေးတယျကှ မိနျးမနဲ့ယောကျြားလိုးတာ ဓမ်မတာပဲ သူ့ဘကျကလိုကျလြောရငျ မငျးဘကျကလညျးသူကနြေပျအောငျလိုးပေးရမယျ ….” သူလကျမခံရငျတော့ရှောငျကှာအတငျးမုဒိနျးကငျြ့တာ သကျငယျမုဒိနျးကယုတျမာအောကျတနျးကတြယျ.. ဟုတျကဲ့ ကြှနျတျောအဲလို့တော့မလုပျပါဘူးဗြ အေး မငျးသူစှဲသှားအောငျလိုးပေးကှာ သူကနြေပျဖို့အဓိကပဲလိငျဆကျဆံရငျ ရှံလို့မရဘူး သူကနြေပျအောငျအစှမျးကုနျပွုစု … ဟုတျကဲ့ မိနျးမတဈယောကျကိုအစှမျးကုနျလိုးပေးပွုစုပေးခငျြရငျ ဆေးလိပျရှောငျကှာ အဆုတျအတှကျလညျးမကောငျးဘူး အမောလညျးမခံနိုငျဘူး …ပွီးရငျ မငျးလီးကိုအခြိနျအားရငျ မုနျ့ညငျးဆီနဲ့နှိပျနယျပေး သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးထား ဒဈကိုလှနျရသေခြောဆေးပေးကှာ ဒါမှသာ မငျးပစ်စညျးကကနျြးမာမှာ သနျ့ရှငျးမှာ ဟုတျကဲ့ပါဗြ ကြှနျတျောဖာခဖြူးပါတယျ…. လိုးတတျပါတယျ ဟ …မတူဘူးငါ့တူရ အဲ့ဒါ အခကွေးငှနေဲ့မငျးအထှကျအထိပျမရောကျဖူး ပွီးတော့မငျးမသှားခငျငါ့ဆီလာကှာ ငါအားဖွညျ့အစာကြှေးမယျ….အေး ည မငျးဂှငျးမထုနဲ့ဦးကှာအားကုနျမယျမနကျဖနျအတှကျထားလိုကျဦး ဟုတျကဲ့ဗြာ ထို့နောကျနောကျနမေ့နကျကြှနျတျော အောငျခမျြးသာမှာအရမျးကိုပြျောကာ မဝငျးဆိသို့မသှားမီ ဦးဇယေဆြီသို့ထှကျလာခဲ့ပါတယျ..
ဦးဇယေကြ… ဟ လုံလဝီရိယ ကောငျးလို့ပါလားကှ…လာကှာ ငါဆိပျရိုးစှပျပွုတျလုပျထားတယျ ဆိတျရိုးစှပျပွုတျ ကွကျသှနျဖွူနီ ပြားရညျ ဒိနျခဉျြ တို့က သုတျရညျအတှကျကောငျးတယျ ပိုပွီးမာစတေယျကှ ကလေးမရနိုငျ သုတျရညျကွဲတဲ့လူတှဆေို ကွကျသှနျဖွုနီမြားမြားစားပေးရတယျစားကှာစှတျပွုတျ ပွီးတိုကျပှဲ သှားတိုကျတော့…. ကြှနျတျောလညျးဆိတျရိုးစှတျပွုတျစားကာ ကွကျသှနျဖွူတဈလုံးမီးဖုတျထားတာ စားပွီး ဦးဇယေကြိုနူတျဆကျကာမဝငျးဆီကိုထှကျလာပါတော့တယျ ဘတျစီး၍မဝငျးဆိုငျသို့ရောကျသောအခါ လူရှငျးနပွေီး မဝငျးမှ လာ ကလေးရယျ နောကျကလြိုကျတာ….. လာမှာပေါ့ ခဈြဖို့အားဖွညျ့နတော ဟားးဟား… ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျမှရယျပွုံးကာတကျသှားကာ အိမျထဲရောကျတာနဲကတံခါးပိတျပွီးသောအခါ ကြှနျတျောမှမဝငျး၍ဆူဖွိုးသောခန်ဓာကိုယျကိုဖကျကာ ….အတငျးနမျးရူံနပေါတော့တယျ မဝငျးမှာလညျး ရမကျထနျသောအနမျးမြားဖွငျ့ပွနျတုနျ့ပွနျ့ပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အငမျးမရကို တပျမကျစှာ ပှတျကာရမကျယဉျကွောထဲစတငျခရီးနှငျပါတော့တယျ….
ပလပျ ပပလျ ဟူး…တဈယောကျလမေူတျတဲ့အနံ အသံတှေ ပှတျတိုကျတှေ နမျးသံတှနေဲ့ ……. ဟူး….ထို့နောကျကြှနျတျောာမဝငျးအကြီင်ျကိုဆှဲခြှတျကာ နို့နှဈအုံကိုမှကော အငမျးမရစို့ပါတော့တယျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျပလပျ ပလပျ ဟူးး မောငျလေးရယျ အငမျးမရကှယျ …ဟူးး ပလပျ ပလပျ ပလပျ…ထို့နောကျ မဝငျးရဲ့လညျပငျး ခြိုငျး ဗိုကျတို့ကိုအငမျးမရလြှာဖွငျ့ယကျနကော မဝငျးမှာလညျး နူတျမှမောငျလေးရယျ မောငျလေးရယျနဲ့တနပေါတော့တယျ .. ပလပျ ပလပျ ..ဟူး..မမရယျ မောငျလေးရယျ….. ထို့နောကျမဝငျးထဘီကိုဆှဲခြှတျကာ အမှေးအုံထူထပျလှသော အနံပွငျးလှသောစောကျဖုတျအုံကွီးအား သရတေမွမွဖွငျ့စတငျယကျပါတော့တယျ.. ပလပျ ပလပျ ဟယျ မောငျလေး အဲ့လောကျမလုပျဘူးထငျလို့ မလုပျပါနဲ့ သခြောမဆေးရသေးဘူး မောငျလေး အျောနစေဉျမှာကြှနျတျောဟာပွောငျးပွနျစောငျးအိပျလိုကျ ကာမဝငျးပါးစပျထဲလဒဈပျေါအောငျဆှဲခကြာထိုးထညျ့လိုကျပါတော့တယျ.. မဝငျးဟာ အဲ့ကမြှအငမျးမရ လီးနံရမှ အငမျးမရစုတျပါတော့တယျ…ပလပျ ပွှတျ ကောငျးလိုကျတဲ့မာလိုကျတဲ့လီးကွီး.. ကြှနျတျောသညျလညျး မဝငျးရဲ့အမှေးကွားမှာ ပွဲလနျနသေောနူတျခမျးလှာကွားသို့ စောကျခြေးမြားသိပျမစငျသောအဖုတျထဲသို့လြှာကိုထိုးထညျ့ကာလိုးပေးနတေော့တယျ…..
အီး…အီး……ပွှတျ လြှာကိုပွားလိုကျတငျကာ လကျြလိုကျ မာတောငျကာထိုးထှကျနသေောအစိကိုလြှာနဲ့ထိုးလိုကျနဲ့ အစှမျးကုနျပွုစုလကျြရှိပါတယျ…ပလပျ ပလပျ ပလပျ ပလပျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ အိး…ထို့နောကျမဝငျးမှာသူဧ။ျသရေ ကြှနျတျောလရတှေစေိုနသေောလီးကို စုပျနကော ကြှနျတျောမှာလညျး ငံကြိကြိ စောကျရညျမြားနူတျခမျးမြားပကြေံကာ အပွနျအလှနျလုပျပေးနပေါတော့တယျ.. မောငျလေး လိုးရအောငျလေ ဟုတျ… လိုးမယျလေ မိနျးမ… ထို့နောကျမဝငျးအားဒူးထောငျဖွဲအိပျခိုငျးကာ လီးကိုဖွညျးဖွညျးခငျြးစတငျထိုးထညျ့ပါတော့တယျ.. အီး….အားးးး ကွီးလိုကျတာကှယျ ….အရသာရှိလိုကျတာ ပွညျ့နတောပဲ လိုးမခံရတာတောငျကွာပွီ အီး….ထို့နောကျကြှနျတျောမှာတရပျစပျဆောငျ့ပါတော့တယျ… အ အ အ အ အ အ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ အအ အှတျ အှတျ အအအအအအ ဖတျ ဖတျ အအအ မောငျလေးရေ သားရေ ကလေးရေ ကောငျးလိုကျတာ အှတျ အှတျ အအ တရပျစပျဆောငျ့လိုကျ သူပါးစပျထဲတံထှေးမြားထိုးခလြိုကျနဲ့ အှတျ အှတျ ဖတျ ဖတျ အအအ အခကျြ ၂၀၀ခနျ့ဆောငျ့အပွီး နှဈယောကျတူတူ ပနျးမိသှားပါတော့တယျ… အူး….. ကောငျလိုကျတာမိနျးမရယျ ကောငျးလိုကျတာမမရယျ….နှဈယောကျစိမျကာဖကျကာအနားယူနပွေီးး.. နာရီဝကျခနျ့အကွာ…မမ ကုနျးဗြာ ခှလေိုးလိုးမယျ ဟယျလိုးနိုငျသေးတာလား …မထငျရဘူးကနျြ…. ဟဟ ဆိပျရိုး ကွကျသှနျဖွူအစှမျးတှလေဗြော ….ဟဟဟ ထို့နောကျမဝငျးအားကုနျးခိုငျးကာ နောကျကနေ စူထနသေောစောကျဖုတျအုံကွီးထဲသို့.. လီးကိုဆောငျ့ထိုးထညျ့လိုကျပါတယျ… အား…အနှဈရှိလိုကျတာ..ကလေးရယျ ကြှနျတျောမှာ နောကျကနတေရပျစပျဆောငျ့လိုးပါတော့တယျ..
ဖတျ ဖတျ ဘှတျ ဘှတျဖှတျ အှတျ ဖတျ ဖတျ အအအ အအအ အ ဖတျ ဖတျ ဥကဖငျနှလုံးကိုရိူကျသံ လရနေဲ့စောကျရမြေားထှကျသံ စောကျရညျလရနေံနဲ့ တဏှာစိတျအပွညျ့နဲလိုးခှဲနမေိောတ့တယျ ဖတျ ဖတျဖတျ မညှာနဲ့လိုး အဲ့လိုလိုး လငျလေးလိုးး မမကိုလိုးမယျ အအအ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖှတျ ထို့နောကျလိုးနစေဉျ ညှိပွီးဆှဲဆောငျမူရှိသောဖငျပေါကျလေးထဲတံထှေးထှေးထညျ့ကာလကျညှိးနဲပါလိုးပေးနမေိတော့တယျ.. အူးးးး အီးးးဘယျလိုတှလေုပျနတောလဲကှယျ…. ဖတျဖတျ ဖတျ ဖတျ အ အအ အှတျ အှတျ အှတျ ဖငျပေါကျ မခနျြ စောကျဖုတျမခနျြအစှမျးပွမူနဲ့မဝငျးမှာ စောကျရညျမြားတရဟောစညျးကကြာရှကေို့ငိုကျကကြာတုနျတကျနပေါတော့တယျ….ဟငျး..ဟငျး.. ဟငျးး ကြှနျတောမှာအနားမပေးဘဲ တရပျစပျဖငျထိုငျရပျ ဆကျမညှာမတာဆောငျ့လိုးပေးနပေါတယျ..ဖတျဖတျဖတျ (ဦးဇယေပြွောသောနညျးမှာ အေး ကွာကွာလိုးနိုငျဖို့အတှကျ ဂှငျးထုရငျ ပွီးခါနီးကခြဏရပျ စိတျကိုတခွားပွောငျး နောကျတခါအဲ့လိုထပျလုပျ…၄ခါလောကျကငျြ့ နောကျဆုံးခါမှလရထေုတျ …တကယျလိုးနတေဲ့အခါလညျးပွီးခါနိးရငျ လီးကိုထုတျ ကဈဆငျရိုကျတာပှတျသပျတာလုပျလိးနညျးနညျးပွနျကမြှထပျလုပျ မိနျးမတှကေပွီးတာကွာတယျအဲ့လိုလုပျပေးမှလုပျနိုငျမှ) ဆိုသောကွောငျ့ကြှနျတျောမှာလီးကိုထုတျကာမဝငျးရဲ့ရှဲ့နသေောစောကျဖုတျကိုအတငျးထပျလကျြနမေိပါတော့တယျ…. ပွီးနောကျမဝငျးအား ပေါငျနှဈခြောငျးကိုမွှောကျခိုငျးပွီး အီးး…အား…မပွီးသေးဘူးလားးခလေးရယျ ဖတျ ဖတျ အှတျ အှတျ အှတျသပေါပွီ အှတျအှတျ ဖတျ ဘှတျဘှတျ ဘှတျ နဲ့အခကျြ၇၀ခနျ့အကွာမှာမဝငျးစောကျဖုတျထဲကိုတရပျစပျပနျးလိုကျပါတော့တယျ…
အီး….မြားလိုကျတာအရတှေကှေယျ ထို့နောကျကြှနျတျောတို့မှာ ၃နာရီခနျ့ဖကျအိပျကာ ရခြေိုးကာဦးဇယေဆြီသို့ထပွနျလာပါတော့တယျ ဦးဇယေကြိုထိုအကွောငျးပွောပွရာကောငျးတယျကှာ အဲလို့သာလိုးပေး မငျးကအနျတီမမ ကွိုကျတာဆိုတော့အဲ့လိုမြိုးလုပျပေးမှ…..မိနျးမတှကေနှဈဦးသဘောတူကွညျဖွူရငျလုပျသာလုပျ အားပေးတယျ ကနြေပျအောငျလုပျပေးနိုငျအောငျလညျးကိုယျဘကျကပွငျဆငျထား သနျ့ပွနျ့နေ ဆေးလိပျတတျနိုငျသမြှရှောငျ အဟာရဖွညျ့စှတျစာစားအားကစားးလုပျပေါ့ကှာ မုဒိနျးကငျြ့တာ သကျငယျမုဒိနျး ပွီရငျဘတျဈပျေါမှာထောကျတာအဲ့ဒါတှသောရှောငျကှာ လူသတျသမားထကျမုဒိနျးသမားကရှံဖို့ကောငျးတယျ အခုခတျေဆိုကလေးတှကေိုမုဒိနျးကငျြ့တာ သတျပဈရမှာအောကျတနျးကတြာ တို့နိုငျငံမှာမုဒိနျးမူကိုသဒေဏျမပေးတာတျောတျောဆိုးတယျကှ…. စကားစမွညျပွောကာ ပငျပနျးတယျ ဦးဇယေနြားလိုကျဦးမယျ အေး တူလေး ဒိနျခဉျြဝယျသောကျကှာ ဒိနျခဉျြက သုတျရညျပွနျပွညျ့စတေယျ ကွကျစှတျပွုပျတို့ငှကျပြောသီးသောကျအားပွနျဖွညျ့လိုကျဦးဟေ့ မငျးမမကွီးကို နောကျတခါအဲ့ထပျကောငျးအောငျလိုးပေးရမှာ… ဟားး….ဟုတျကဲ့ပါဗြာ ဆိုကာအိမျသို့ထှကျလာခဲ့ပါတယျ.. တနေ့ ဦးဇယေအြိမျ အနီးလကျဘကျရညျဆိုငျတှငျထိုငျကာအပငျြးပွပွေောနခေိုကျ … ဦးဇယြေ မနကေ့ဦးလေးပေးလိုကျတဲ့ အောစာအုပျမိုကျတယျဗြ …
စာအုပျထဲကအတိုငျးဗြာ အိမျဘေးကအပြိုကွိးအိပျနတေုနျးတကျလိုးလိုကျလို့ကတော့အနှဈပဲ…. ဟ ..ဟဲ့ရောငျရာ မငျးဝိုငျးအရိုကျခံရမှာပေါ့ အောစာအုပျဆိုတာ မငျးဂှငျးထုဖို့သကျသကျပဲ အပွငျမှာလိုကျလုပျလို့မရဘူး သူတို့က မငျးအာသာဖွဖေို့မိနျးမမရှိတဲ့လူတှေ အိမျထောငျရှိလညျးအဝေးရောကျနတေဲ့လူတှေ အာသာဖွဖေို့သကျသကျပဲအပွငျမှာလိုကျလုပျလို့မရဘူး အေး …အောစာအုပျထဲကအတိုငျး တကျလုပျ အောစာအုပျထဲမှာကွိုကျသှားတယျအပွငျမှာကအြရိုကျခံရ အရှကျကှဲအကြိုးနညျးဖွဈလို့အမူဖွဈတာတှအေမြားကွီးပဲကှ ပွီးမှငွိမျမခံတော့သတျမိ ဒုစရိုကျမူတှကေ အဲ့လိုဦးနှောကျမရှိတဲ့လူတှဖွေဈတာ အောစာအုပျကိုဂှငျးထုဖိုကသကျသကျပဲကှမှတျထား….. ဟုတျကဲ့ပါဗြ အပွငျမှာလညျးမလုပျပါဘူး စိတျကူးကွညျ့တာပါ… အေး မငျး အောစာအုပျဖတျလုပျခငျြ မငျး မဝငျးကိုလုပျလေ မဝငျးကိုလုပျတာနညျးနညျးရိုးလာလို့ဗြ အေး ဒါဆိုမငျးဖာသှားခပြေါ့ကှ…. မဟုတျဘူးကြှနျတျောစျောနှငျးလေးကို ဟိုတယျလိုကျဖို့ညှိနတော သှားစားမလို့ … အေး အဆငျပွရေငျခပြေါ့ကှ…. ဒါမယျ့ကှာ တကယျ့အပြို မိနျးမကောငျးတဈယောကျကိုတူတူအိပျပွီးယူနိုငျတာအကောငျးဆုံးပဲကှာ ဘာသာရေးအရရော ယောကျြားတဈယောကျတာဝနျအနနေဲ့ရော…မငျးသှားတဲ့အခါ ခြောငျးရိုကျတှသေတိထားကှာ အဲ့ဒီခြောငျးရိုကျအောကားတှပေျေါတာကွညျ့ပါလားအဲ့ဒါငါတို့ကတော့ကွညျ့ကောငျးတာပေါ့ကှာ ဒါမယျ့ ဒါ အတှငျးရေး ခြိုးဖောကျတာပဲ အဲ့ဒိခိုးရိုကျခံရတဲ့မိနျးကလေးဘဝက အဲ့ဒီကောငျမယူရငျ အရှကျကှဲသဖေို့ပဲရှိတယျတခြို့ဖုနျးဆိုငျတှဆေို အဲ့လိုလုပျတာတျောတျောရိုငျးတယျ…
ဟုတျတယျဗြ ဒါတော့စဉျးစားမိတယျ ….နှငျး ကိုခဈြပါတယျ ဟိုတယျသှားနပွေီးယူမှာပါဗြ ယောကျြားတဈယောကျတာဝနျသိပါတယျ လောဆညျဖာပဲသှားခမြယျဗြ မမကွီးတှရှေိတယျ ဘိသှားမယျ…. အေးအေး ကှနျဒုံးဆှတျကှာစိတျခရြအောငျ… ဟုတျကဲ့ ဟုတျကဲ့ ဒါနဲကြှနျတျောလညျး လိူငျသာယာမှဘိတဈခု သို့ သှားခဲ့ရာ ရောကျသောအခါ ဘိမှ ခေါငျးအား အနျတီ…အသကျ၃၅ လောကျမရှိဘူးလား ရှိတော့ရှိတယျ ဝငျနလေားမသိ…ဒီမှာအငယျအသဈလေးတှရေောကျတယျလကှေယျ…. ဟာ ကြှနျတျောမမကွီးတှပေဲ ကွိုကျတာ…..မရှိရငျ အနျတီနဲ့ဝငျမယျ အမလေး မလုပျပါနဲ့ကိုယျတျောခြောရယျ ….ကွညျ့ပေးပါ့မယျ ဟေ့…..အေးအေး ရှိလားချေါလိုကျပါဦး……. လာပွီ လာပွီ အမ အသံကွားရာဘကျသို့လှညျ့ကွညျ့လိုကျရာ ရုပျရှငျမငျးသမီး ဝါဝါအောငျကိုယျလုံးနဲ့ အသားညှိညှိ နဲအသကျ၃၅နှဈခနျ့မိနျးမတဈယောကျထှကျလာပွီး….. အေးရေ ..ဒီမှာဧညျသညျလိုကျသှားလိုကျပါဦး…… ဟုတျ ဟုတျ….. ဟေ့ မောငျလေး ပိုကျဆံကတော့ ၁နာရီ ၂သောငျးဘယျလိုလဲ ဝငျမယျဗြာ ရော့ ၄သောငျး ၂နာရီ…….. ထို့နောကျမအေးနောကျသို့လိုကျကာ မအေးမှာဖာသညျမတိုထုံးစံအတိုငျးပေါငျဖွဲကားမပေးဘဲ ထိုငျနသေောကွောငျ့ အမ ဘာလို့လဲ မောငျလေး အမက စဝငျတာဒီနမှေ့ စီးပှားရေးတျောတျောကွပျတညျးနလေို့ နရေတာစိတျပါလို့ လူရှေးပွီးဝငျတာမောငျလေးကိုမွငျတော့ သနျ့သနျ့မို့လို့….နညျးနညျးတော့ရှကျတယျ ကွိုကျတယျဗြာ ဒါမြိးဆိုကာ မအေးကိုသိုငျးဖကျကာ နမျးရူပျမိတော့တယျ… ရှတျ ရှတျ အယျ အရမျးပဲ ကောငျလေး ကွမျးတာ… ထို့နောကျမအေးရဲ့နို့ကိုစုပျနယျကာ….မမ မူတျပေးပါလား… ကှနျဒုံးနဲ့မဟုတျဘူးနျော အငျးပါ ကှယျ မကျြစောငျးထိုးလေးထုတျကာ ပလှအေစှမျးပွပါတော့တယျ
အား…အူး…အားးး ပွှတျ ပလှတျ ပွှတျ…..ပွှတျ အူးးးး ကောငျးလိုကျတာဗြာ နှေးနတောပဲ …..ပွှတျ အူးး… ထို့နောကျ မအေးခြှတျဗြာ အရငျတုနျးကဖာခရြငျတခါမှတော့မမူတျဘူး အခုမူတျပွီ…မအေးထဘီကိုလှနျကာ မူတျပေးပါတော့တယျ …မအေးစောကျဖုတျမှာနံစျောမနဘေဲ အဖုတျနံသငျးသငျးနဲ့မူတျကောငျးကောငျးနဲ့ ယကျပေးနပေါတော့တယျ….. မအေးမှာလညျး ကြှနျတျောခေါငျးကိုစှတျဖိကာ ဖီးတကျနပေါတော့တယျ အီးးးး အီးးးးပွှတျ လီးစုတျသံ ယကျသံတှနေဲ့တဏှာဇောထနပေါတော့တယျ…..ပလပျ ပလပျ ပလပျ ထို့နောကျမအေးမှာ မောငျလေး နတေော့ဆိုကာ ကှနျဒုံးစှတျပေးပါတော့တယျ မအေးဖွဲကာ ကုတငျပျေါအိပျပေးသောအခါ အီး..လီးကိုထိုးထညျ့လိုကျသောအခါ သိပျခြောငျမနဘေဲ…အား..အား… ကွပျတယျဗြာ အားးးးလီးကိုအဆုံးထိထိုးထညျ့ကာနှဈဥိးသားကဈဆငျရိုကျကာ…. ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဘှတျ ဘှတျ အှတျ အအအအ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ အအအ အားး အား… အားးးးးးးးးကောငျးတယျမောငျလေး ခြ မညှာနဲ့ အှတျ ဖှတျ ဖှတျ လှကွေီးထိုးနဲ့အခကျြ၁၀၀လောကျဆောငျ့မောလာသောအခါ…….. မောငျလေး မမ တကျဆောငျ့ပေးမယျ…. ကြှနျတျောလီးပျေါ ထိုငျခကြာမွငျးစီးပေးပါတော့တယျ …
အီးးးးအီးးး အအအ အအအ လီးကိုအဖုတျထဲထညျ့ကာမှပေေးလိုကျဆောငျ့ပေးလိုကျနဲ့ …အ အားးးးတဏှာထနျတဲ့အမြိုးအစားထဲကဆိုတာ သိလိုကျရတယျ…အီးးးအားးးးးးးမောငျလေး အောကျကဆောငျ့ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ အအအအအ အား..ဆိုကာမအေးကောကြှနျတျောကောပွီးကာမအေးမှာ ကြှနျတျောပျေါမှောကျကသြှားပါတော့တယျ…… ခဏအကွာမအေးမှာ ကှနျဒုံးကိုခြှတျကာသနျ့စငျပေးပွီးဘေးမှလာလှဲအိပျလိုကျပါတယျ အမ ကထနျတယျနျော ဟုတျတယျမောငျလေး သကျသကျနလေညျးနခေငျြလို့ လာလုပျတာ ကြှနျတျောတော့တနျသှားပွီ အခြိနျကနျြသေးတယျ နောကျ၁ခြီနဦေးမယျနျော… အငျးပါ…(မကျြစောငျးလေးထိုးလကျြ) သူလညျးသိပျထနျတာပဲ မူတျတာ အုံလိုကျကြှတျထှကျသှားမလားအောငျ့မတေ့ယျ…. ထို့နောကျအမောပွသေောအခါ မအေး ကုနျးဗြာ ဖငျဖူးခေါငျးထောငျ လိုးခှဲမယျ အမလေးဖွေးဖွေးလုပျပါ တျောလေးရယျ…. ထို့နောကျဖငျဖူးခေါငျထောငျ စောကျဖုတျအုံပွူထှကျလာတာကို လိုးခငျြစိတျထလာကာ …လီးကိုစိုကျကာထိုးထညျလိုကျပါတော့တယျ… အီး….ဖွညျးဖွညျး…အီးး ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ အအအအ အအအ အအ အးး အှတျ အှတျ ဖှတျဘှတျ ကြှတျကြှတျ အမလေးလေး ဖတျဖတျမအေးကိုတရပျစပျဆကျတကျကြုံးပါတော့တယျ…
မအေးကညညျးလညျးညညျး အျောလညျးအျော ကြှနျတျောလညျး လီးမှာကပျြ၍အရသာအလှနျကောငျးကာ ခဏအကွာမှာပွီးခငျြလာ၍ မောငျလေး လာလာ မကျြနှာပျေါပနျး ဆိုသောကွောငျ့ ၂၀ခကျြခနျ့ဆကျတိုကျ အအအ ဖတျ ဖတျ ဖတျအအှတျ အှတျအအ ဆောငျ့ကာလီးကိုထုတျကာမကျြနှာပျေါပနျးလိုကျပါတော့တယျ… နှဈယောကျဖကျကာမှိနျးနခေိုကျ အခြိနျစပွေီ့ဆိုသောကွောငျ့ နှဈယောကျကဈဆငျရိုကျကာ အပွနျအလှနျမခှဲနိုငျမခှာနိုငျဖွဈ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ကိုငျပှတျသကျနကော နောကျတဈခါလာပွော၍ ဘောကျဆူးး ၅၀၀၀ပေးကာပွနျထှကျလာခဲ့ပါတော့တယျ….. ထိုအကွောငျးဦးဇယြေ ပွောသောအခါ ဟဟဟ ကောငျးတယျကှာ ကောငျးတယျဖာသညျမခတြာ ပိုကျဆံပေးခတြာပဲကှာ သူလညျးအဆငျပွေ ကိုယျလညျးကောငျးပေါ့ တကယျသာမာနျအပြိုလေးတှကေိုလိုးခငျြရုံသကျသကျနဲ့ ခဈြဟနျဆောငျတာထကျစာရငျ မငျးအမြားကွီးတျောတယျ….အေး ငါ့ကောငျဘဝအတှကျလညျးလုပျဦးကှာ ဆကျဈ ဆိုတာကောငျးတဲ့အရာပဲ အဲ့စိတျအရမျးမြားသှားရငျလညျးမကောငျးဘူး အောကားအရမျးမကွညျ့နဲ့ကှာအားကုနျတာပေါ့ ..စိတျထနတေဲ့အခြိနျသာကွညျ့ အာသာဖွပေေါ့ကှာ ဟုတျပွီလား ဟုတျကဲ့ပါဗြ ကြှနျတျောဦးဇယေပြွောတာမှတျထားပါတယျ….. အေးကှာ …ပွနျတော့ ငါ့ကောငျ.. (ပွီးပါပွီ)
ကျွန်တော် နာမည်အောင်ချမ်းသာဖြစ်ပြီး အသက်ကတော့ ၂၂နှစ်ပါ ကျွန်တော်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းကရပ်ကွက်ထဲက အကြီးတွေအရက်သမားတချို့တွေနဲ့ပေါင်း ပြီးငယ်ငယ်ကတည်းကဆေးလိပ်သောက် အရက်သောက် ဖာချ နဲ့အချိန်ကုန်လွန်လာသူဖြစ်ပါတယ် ..ငယ်ဘဝဆေးလိပ်ကွမ်းအရက်ကို၁၇နှစ်လောက်ကတည်းက စသုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် ရူနာရိူက်ကုန်းပုံစံဖြစ်ကာ အသိမိုက်ကာ ဆိုးသွမ်းနေမိပါတယ်….သူငယ်ချင်းတွေလာခေါ်လျှင်အရက်ဝိုင်း အသုဘအိမ်ဖဲဝိုင်း တခါတလေ တံတားအောက်ဖာခေါင်းများနဲ့ပေါင်းကာ ဖာချလိုက်နဲ့မိဘအပေါ်မသိတတ်မလိမ်မာ ဘုရားတရားမသိနဲ့ အချိန်ကုန်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုစဉ် ကျွန်တော်ဧ။်ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးသောသူမှာ ဦးဇေယျဆိုသော အသက်၅၆နှစ်ခန့်လူကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။သူသည် စံပြဈေးအနီးနား စီမံကိန်းတွင်နေထိုင်ပြီးကျန်းမာရေးအရ ပင်စင်စားတစ်ဦးဖြစ်သည် ။
ကျွန်တော်ငမိုးရိပ်ချောင်းတဖက်ကမ်း ထန်းရည်သွားသောက်ပြီးအပြန်တွင်မူး ပြီး၇ဆူဘုရားအနီးအရိပ်ရခုံတစ်ခုတွင်ထိုင်နေရာ ဦးဇေယျမှာလည်း ထိုနားက ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းသို့လာရာမှ ဆုံဖြစ်ရာ အသိမိတ်ဆွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ် ထို့နောက်ကျွန်တော်ဟာအားလပ်ရပ်သူ့ဆီသွားကာ သူအပြောများနားထောင်ကာ အပျင်းပြေစကားသွားပြောလေ့ရှိပါတယ် တနေ့နေ့လည်ခင်းတချိန် မိုးရွာနေစဉ် မိမိမှာပျင်းလွန်းသောကြောင့် ဦးဇေယျဆီသွားမယ်ဆိုကာ ဘတ်စ်စီးကာထွက်လာခဲ့ပါတယ်…ဘတ်စ်မှာလူအင်မတန်မှကြပ်၍ စပယ်ယာမှ… အနောက်ကလေးကိုတိုးပေးကြပါဦးခင်မျ နေရာအလွတ်တွေရှိပါတယ်…ဆို၍ ကျွန်တော်လည်းတိုး၍ တိုး၍အသက်၂၅နှစ်ခန့် ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ပြည့်ကောင်မလေးတစ်ယောက်နောက်သို့ရောက်သွားလေတော့တယ် ကျွန်တော်လည်းပထမတွင်စိတ်မပါသော်လည်း ကောင်မလေးဆီကရသောကိုယ်သင်းနံနှင့် လူတိုးသောကြောင့် သူဧ။်တင်ပါးနဲ့ထိသော အတွေ့ကြောင့် ညီတော်မောင်မှာတောင်တက်လာပါတော့တယ်…ကျွန်တော်လည်း တောင်နေသောကြောင့် လူကလည်းကြပ် မထိ တထိ တို့ကြည့်ရာကောင်မလေးမှာနောက်လှည့်ကြည့်ကာ နှူတ်ခမ်းကိုကိုက်ကာပြန်လှန့်သွားပါတော့တယ်…ကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြော၍ လီးနှင့် သူဧ။်ဖင်ပေါက်ရှိရာနေရာမှန်းကာ ပွတ်နေမိတော့တယ်….
လီးနှင့်သူဧ။်ထဘီနှင့်ထိသော ပွတ်နေမိသော အရသာမှာတစ်မျိုးတဖုံထူးဆန်း၍ ဖီးအလွန်အင်မတန်မှရနေမိတော့တယ်….. ဘရိတ်အုပ်ရင်ဖင်ကိုဆောင့်ထည့်လိုက် ပြီးလည်ပင်းကနေ ကိုယ်သင်းနံလေးရူလိုက်နဲ့အချိန်ကုန်မှန်းမသိကုန်နေမိပါတော့တယ်…ထိုစဉ် စီမံကိန်း ပါလားဟေ့…. ထိုမှကျွန်တော်လည်း သတိရကာ ပါတယ်ဗျို့ ပါတယ် ဆိုကာတစ်ချက်ထပ်ဆောင့်ကာ အွတ် အွတ် …ထို့နောက်ဆင်းလာခဲ့ပါတော့တယ် ထို့နောက် ဦးဇေယျအိမ်ရောက်တော့စကားစမြည်ပြောရင်းထိုအကြောင်းပြောမိသောအခါ ဦးဇေယျက……ဟာ ငါ့တူရယ့် မင်းမှားပြီ မင်းဘာလို့အဲ့လိုလိုက်ထောက်တာလုပ်ရတာလဲ ဦးလေးကလည်းဗျာ သူတောင်ကြိုက်လို့ ငြိမ်ခံနေတာကိုဗျ ဟ မင်းကိုဘယ်သူကြိုက်တယ်ပြောလဲ အဲ့ဒါရှက်လို့ကွ မြန်မာမိန်းကလေးတွေက မဟုတ်တဲ့နေရာမှာရှက်တယ် အဲ့လိုဆိုမပြောရဲ မအော်ရဲကြဘူး…….. မဟုတ်ပါဘူးဗျာ နောက်လှည့်ကြည့် အံကြိတ်ပြီးတောင်ပြန်လှန့်သွားသေးတယ်…. မဟုတ်တာကွာ အဲ့ဒါရှက်ကြောက်ပြီး စိတ်ညစ်နေတာကွ မင်းသူကိုမကြည့်မိဘူးလား ချွေးတွေပြန်နဲ့အဲ့ဒါ ရှက်စိတ်ကြောက်စိတ်ကြောင့်ကွ မင်းယောကျာ်းကောင်းဆိုမလုပ်ရဘူး အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းအမေ မင်းညီမကိုတခြားကောင်တစ်ကောင်ကနောက်ကထောက်နေရင်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ..မင်းသတ်ပစ်မှာမဟုတ်လား…. သတ်ပစ်မှာပေါ့ဗျ…
အေးလေ ငါပြောတာအဲ့ဒါ နောက်တစ်ခါကျမလုပ်နဲ့ ကြောက်စိတ် ရှက်စိတ်ကြောင့် ငြိမ်ခံနေတာ ကြိုက်လိုမဟုတ်ဘူး မင်းနောက်တစ်ခါအောက်တန်းမကျနဲ့ ကိုယ့်အမေကိုယ့်နှမလိုသဘောထား အဲ့လိုလုပ်တာတွေ့ရင်တောင်မင်းဝင်ပြီးကူညီရမယ်ဟုတ်ပြီလား…. ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်မှားသွားတယ်နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ စကားစမြည်ပြောထမင်းစားကာ အိမ်သို့ည၈နာရီလောက်မှပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်… ကျွန်တော်နှင့်ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းများဒဂုံဘက်ထန်းရည်သွားသောက်သောဆိုင်မှ ပိုင်ရှင်မှာမဝင်းဆိုသော အသက် ၄၅နှစ်ခန့် မုဆိုးမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မဝင်းမှာ ထန်းရည်မှာသောဝိုင်းများကိုအမြဲထဘီတိုတိုဝတ် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီတဝင်းဝင်း ဝ၍အရပ်မှာ၅ပေ၄လက်မရှိသည့် ကလေး၎ယောက်အမေဖြစ်သည်။ကျွန်တော်မှာငယ်စဉ်ကတည်းက အန်တီမမ များကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတမူထူးခြားစွာစိတ်ပါသောကြောင့် မဝင်းဆိုင်ရောက်သောအခါမဝင်းကိုလိုက်ကြည့်နေမိလေသည်။ မဝင်းမှာ ကျွန်တော်ဧ။်အကြည့်တွေကိုသိပြီး ထန်းရည်သွားသောက်တိုင်းမှာ ပြုံးပြကာ တခါတလေ ကျွန်တော်သေးပေါက်ဖို့သွားလျှင် အိမ်သားနားရေချိုးကန်မှာ ယောင်လည်လည်လုပ်လျက်ရှိသည်။
ကျွန်တော်လည်း တခါသူငယ်ချင်းများနှင့်ထန်းရည်သောက်ကာ ထန်းရည်၁၀အိုးခန့်သောက်အပြီးသေးပေါက်ချင်၍ အိမ်သာဘက်ထွက်လာခဲ့စဉ် မဝင်းမှာ ရေချိုးကန်နားတွင်အဝတ်ကုန်းလျှော်ကာ ကျွန်တော်ကိုတွေ့သော ပြုံးပြလျက်ရှိသည်။ ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထလာကာ မဝင်းဖင်ကိုလီးဖြင့်နောက်မှထောက်ပွတ်ကာ မဝင်းရေ ဘာလုပ်နေတာလဲ မဝင်းမှဖင်ကိုနောက်ပြန်ကော့ပေးပြီး ‘အဝတ်လျှော်နေတာလေ” ကျွန်တော်လည်းဖီးတက်လာကာ မဝင်းကိုကောက်ဖက်ကာနို့တွေကိုပွတ်ကိုင်မွှေလိုက်ပါတော့တယ်….ဟဲ့ ဟဲ့ အယ် လောလိုက်တာ ကလေးရယ် မရဘူးဗျာ ချစ်ချင်လာပြီ ….ရွှတ် ရွှတ် … မဝင်းမျက်နှာကိုဆွဲလှည့်ကအတင်း လျှာထုတ်ကာကစ်ဆင်ရိုက်ပါတော့တယ်.. မဝင်းကလည်းသူလျှာထုတ်ကာအပြန်အလှန်ရမက်စောတက်ကာ အပြန်အလှန်နမ်းနေမိတော့တယ် ထိုမျှမကမဝင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့လီးကိုပုဆိုးမှဆုပ်ကိုင်ကာ ကျွန်တော်ကလည်းမဝင်းနို့ကိုမွှေကာနဲ့အပြန်အလှန်ရမက်စောထဲ မျှောနေမိတော့တယ် …. ထို့နောက် အဲ့ တော်တော့ နောက်မှပေါ့ ကလေးရယ် ပေးလုပ်မှာပေါ့ နောက်နေ့ဆိုင်ပိတ်မယ် မမဆီလာခဲ့နော် ဆိုကာဆိုင်ရှေ့ကိုပြေးထွက်သွားပါတော့တယ်….ကျွန်တော်လည်းအပျော်ကြူးကာ ပြန်ခါနီးပိုက်ဆံရှင်းကာမဝင်းကိုမျက်လုံးမှိတ်ပြကာ ဦးဇေယျဆီထွက်လာပါတော့တယ်…..
ဦးဇေယျကို ထိုအကြောင်းပြောပြတော့.. ‘အေး ငါအားပေးတယ်ကွ မိန်းမနဲ့ယောကျာ်းလိုးတာ ဓမ္မတာပဲ သူ့ဘက်ကလိုက်လျောရင် မင်းဘက်ကလည်းသူကျေနပ်အောင်လိုးပေးရမယ် ….” သူလက်မခံရင်တော့ရှောင်ကွာအတင်းမုဒိန်းကျင့်တာ သက်ငယ်မုဒိန်းကယုတ်မာအောက်တန်းကျတယ်.. ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်အဲလို့တော့မလုပ်ပါဘူးဗျ အေး မင်းသူစွဲသွားအောင်လိုးပေးကွာ သူကျေနပ်ဖို့အဓိကပဲလိင်ဆက်ဆံရင် ရွံလို့မရဘူး သူကျေနပ်အောင်အစွမ်းကုန်ပြုစု … ဟုတ်ကဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကိုအစွမ်းကုန်လိုးပေးပြုစုပေးချင်ရင် ဆေးလိပ်ရှောင်ကွာ အဆုတ်အတွက်လည်းမကောင်းဘူး အမောလည်းမခံနိုင်ဘူး …ပြီးရင် မင်းလီးကိုအချိန်အားရင် မုန့်ညင်းဆီနဲ့နှိပ်နယ်ပေး သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထား ဒစ်ကိုလှန်ရေသေချာဆေးပေးကွာ ဒါမှသာ မင်းပစ္စည်းကကျန်းမာမှာ သန့်ရှင်းမှာ ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ ကျွန်တော်ဖာချဖူးပါတယ်…. လိုးတတ်ပါတယ် ဟ …မတူဘူးငါ့တူရ အဲ့ဒါ အခကြေးငွေနဲ့မင်းအထွက်အထိပ်မရောက်ဖူး ပြီးတော့မင်းမသွားခင်ငါ့ဆီလာကွာ ငါအားဖြည့်အစာကျွေးမယ်….အေး ည မင်းဂွင်းမထုနဲ့ဦးကွာအားကုန်မယ်မနက်ဖန်အတွက်ထားလိုက်ဦး ဟုတ်ကဲ့ဗျာ ထို့နောက်နောက်နေ့မနက်ကျွန်တော် အောင်ချမ်းသာမှာအရမ်းကိုပျော်ကာ မဝင်းဆိသို့မသွားမီ ဦးဇေယျဆီသို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်..
ဦးဇေယျက… ဟ လုံလဝီရိယ ကောင်းလို့ပါလားကွ…လာကွာ ငါဆိပ်ရိုးစွပ်ပြုတ်လုပ်ထားတယ် ဆိတ်ရိုးစွပ်ပြုတ် ကြက်သွန်ဖြူနီ ပျားရည် ဒိန်ချဉ် တို့က သုတ်ရည်အတွက်ကောင်းတယ် ပိုပြီးမာစေတယ်ကွ ကလေးမရနိုင် သုတ်ရည်ကြဲတဲ့လူတွေဆို ကြက်သွန်ဖြုနီများများစားပေးရတယ်စားကွာစွတ်ပြုတ် ပြီးတိုက်ပွဲ သွားတိုက်တော့…. ကျွန်တော်လည်းဆိတ်ရိုးစွတ်ပြုတ်စားကာ ကြက်သွန်ဖြူတစ်လုံးမီးဖုတ်ထားတာ စားပြီး ဦးဇေယျကိုနူတ်ဆက်ကာမဝင်းဆီကိုထွက်လာပါတော့တယ် ဘတ်စီး၍မဝင်းဆိုင်သို့ရောက်သောအခါ လူရှင်းနေပြီး မဝင်းမှ လာ ကလေးရယ် နောက်ကျလိုက်တာ….. လာမှာပေါ့ ချစ်ဖို့အားဖြည့်နေတာ ဟားးဟား… ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှရယ်ပြုံးကာတက်သွားကာ အိမ်ထဲရောက်တာနဲကတံခါးပိတ်ပြီးသောအခါ ကျွန်တော်မှမဝင်း၍ဆူဖြိုးသောခန္ဓာကိုယ်ကိုဖက်ကာ ….အတင်းနမ်းရူံနေပါတော့တယ် မဝင်းမှာလည်း ရမက်ထန်သောအနမ်းများဖြင့်ပြန်တုန့်ပြန့်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အငမ်းမရကို တပ်မက်စွာ ပွတ်ကာရမက်ယဉ်ကြောထဲစတင်ခရီးနှင်ပါတော့တယ်….
ပလပ် ပပလ် ဟူး…တစ်ယောက်လေမူတ်တဲ့အနံ အသံတွေ ပွတ်တိုက်တွေ နမ်းသံတွေနဲ့ ……. ဟူး….ထို့နောက်ကျွန်တော်ာမဝင်းအကျီင်္ကိုဆွဲချွတ်ကာ နို့နှစ်အုံကိုမွှေကာ အငမ်းမရစို့ပါတော့တယ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်ပလပ် ပလပ် ဟူးး မောင်လေးရယ် အငမ်းမရကွယ် …ဟူးး ပလပ် ပလပ် ပလပ်…ထို့နောက် မဝင်းရဲ့လည်ပင်း ချိုင်း ဗိုက်တို့ကိုအငမ်းမရလျှာဖြင့်ယက်နေကာ မဝင်းမှာလည်း နူတ်မှမောင်လေးရယ် မောင်လေးရယ်နဲ့တနေပါတော့တယ် .. ပလပ် ပလပ် ..ဟူး..မမရယ် မောင်လေးရယ်….. ထို့နောက်မဝင်းထဘီကိုဆွဲချွတ်ကာ အမွှေးအုံထူထပ်လှသော အနံပြင်းလှသောစောက်ဖုတ်အုံကြီးအား သရေတမြမြဖြင့်စတင်ယက်ပါတော့တယ်.. ပလပ် ပလပ် ဟယ် မောင်လေး အဲ့လောက်မလုပ်ဘူးထင်လို့ မလုပ်ပါနဲ့ သေချာမဆေးရသေးဘူး မောင်လေး အော်နေစဉ်မှာကျွန်တော်ဟာပြောင်းပြန်စောင်းအိပ်လိုက် ကာမဝင်းပါးစပ်ထဲလဒစ်ပေါ်အောင်ဆွဲချကာထိုးထည့်လိုက်ပါတော့တယ်.. မဝင်းဟာ အဲ့ကျမှအငမ်းမရ လီးနံရမှ အငမ်းမရစုတ်ပါတော့တယ်…ပလပ် ပြွတ် ကောင်းလိုက်တဲ့မာလိုက်တဲ့လီးကြီး.. ကျွန်တော်သည်လည်း မဝင်းရဲ့အမွှေးကြားမှာ ပြဲလန်နေသောနူတ်ခမ်းလွှာကြားသို့ စောက်ချေးများသိပ်မစင်သောအဖုတ်ထဲသို့လျှာကိုထိုးထည့်ကာလိုးပေးနေတော့တယ်…..
အီး…အီး……ပြွတ် လျှာကိုပြားလိုက်တင်ကာ လျက်လိုက် မာတောင်ကာထိုးထွက်နေသောအစိကိုလျှာနဲ့ထိုးလိုက်နဲ့ အစွမ်းကုန်ပြုစုလျက်ရှိပါတယ်…ပလပ် ပလပ် ပလပ် ပလပ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် အိး…ထို့နောက်မဝင်းမှာသူဧ။်သရေ ကျွန်တော်လရေတွေစိုနေသောလီးကို စုပ်နေကာ ကျွန်တော်မှာလည်း ငံကျိကျိ စောက်ရည်များနူတ်ခမ်းများပေကျံကာ အပြန်အလှန်လုပ်ပေးနေပါတော့တယ်.. မောင်လေး လိုးရအောင်လေ ဟုတ်… လိုးမယ်လေ မိန်းမ… ထို့နောက်မဝင်းအားဒူးထောင်ဖြဲအိပ်ခိုင်းကာ လီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်ထိုးထည့်ပါတော့တယ်.. အီး….အားးးး ကြီးလိုက်တာကွယ် ….အရသာရှိလိုက်တာ ပြည့်နေတာပဲ လိုးမခံရတာတောင်ကြာပြီ အီး….ထို့နောက်ကျွန်တော်မှာတရပ်စပ်ဆောင့်ပါတော့တယ်… အ အ အ အ အ အ ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အအ အွတ် အွတ် အအအအအအ ဖတ် ဖတ် အအအ မောင်လေးရေ သားရေ ကလေးရေ ကောင်းလိုက်တာ အွတ် အွတ် အအ တရပ်စပ်ဆောင့်လိုက် သူပါးစပ်ထဲတံထွေးများထိုးချလိုက်နဲ့ အွတ် အွတ် ဖတ် ဖတ် အအအ အချက် ၂၀၀ခန့်ဆောင့်အပြီး နှစ်ယောက်တူတူ ပန်းမိသွားပါတော့တယ်… အူး….. ကောင်လိုက်တာမိန်းမရယ် ကောင်းလိုက်တာမမရယ်….နှစ်ယောက်စိမ်ကာဖက်ကာအနားယူနေပြီးး.. နာရီဝက်ခန့်အကြာ…မမ ကုန်းဗျာ ခွေလိုးလိုးမယ် ဟယ်လိုးနိုင်သေးတာလား …မထင်ရဘူးကျန်…. ဟဟ ဆိပ်ရိုး ကြက်သွန်ဖြူအစွမ်းတွေလေဗျာ ….ဟဟဟ ထို့နောက်မဝင်းအားကုန်းခိုင်းကာ နောက်ကနေ စူထနေသောစောက်ဖုတ်အုံကြီးထဲသို့.. လီးကိုဆောင့်ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်… အား…အနှစ်ရှိလိုက်တာ..ကလေးရယ် ကျွန်တော်မှာ နောက်ကနေတရပ်စပ်ဆောင့်လိုးပါတော့တယ်..
ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဘွတ်ဖွတ် အွတ် ဖတ် ဖတ် အအအ အအအ အ ဖတ် ဖတ် ဥကဖင်နှလုံးကိုရိူက်သံ လရေနဲ့စောက်ရေများထွက်သံ စောက်ရည်လရေနံနဲ့ တဏှာစိတ်အပြည့်နဲလိုးခွဲနေမိောတ့တယ် ဖတ် ဖတ်ဖတ် မညှာနဲ့လိုး အဲ့လိုလိုး လင်လေးလိုးး မမကိုလိုးမယ် အအအ ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖွတ် ထို့နောက်လိုးနေစဉ် ညှိပြီးဆွဲဆောင်မူရှိသောဖင်ပေါက်လေးထဲတံထွေးထွေးထည့်ကာလက်ညှိးနဲပါလိုးပေးနေမိတော့တယ်.. အူးးးး အီးးးဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲကွယ်…. ဖတ်ဖတ် ဖတ် ဖတ် အ အအ အွတ် အွတ် အွတ် ဖင်ပေါက် မချန် စောက်ဖုတ်မချန်အစွမ်းပြမူနဲ့မဝင်းမှာ စောက်ရည်များတရဟောစည်းကျကာရှေ့ကိုငိုက်ကျကာတုန်တက်နေပါတော့တယ်….ဟင်း..ဟင်း.. ဟင်းး ကျွန်တောမှာအနားမပေးဘဲ တရပ်စပ်ဖင်ထိုင်ရပ် ဆက်မညှာမတာဆောင့်လိုးပေးနေပါတယ်..ဖတ်ဖတ်ဖတ် (ဦးဇေယျပြောသောနည်းမှာ အေး ကြာကြာလိုးနိုင်ဖို့အတွက် ဂွင်းထုရင် ပြီးခါနီးကျခဏရပ် စိတ်ကိုတခြားပြောင်း နောက်တခါအဲ့လိုထပ်လုပ်…၄ခါလောက်ကျင့် နောက်ဆုံးခါမှလရေထုတ် …တကယ်လိုးနေတဲ့အခါလည်းပြီးခါနိးရင် လီးကိုထုတ် ကစ်ဆင်ရိုက်တာပွတ်သပ်တာလုပ်လိးနည်းနည်းပြန်ကျမှထပ်လုပ် မိန်းမတွေကပြီးတာကြာတယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးမှလုပ်နိုင်မှ) ဆိုသောကြောင့်ကျွန်တော်မှာလီးကိုထုတ်ကာမဝင်းရဲ့ရွဲ့နေသောစောက်ဖုတ်ကိုအတင်းထပ်လျက်နေမိပါတော့တယ်…. ပြီးနောက်မဝင်းအား ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုမြှောက်ခိုင်းပြီး အီးး…အား…မပြီးသေးဘူးလားးခလေးရယ် ဖတ် ဖတ် အွတ် အွတ် အွတ်သေပါပြီ အွတ်အွတ် ဖတ် ဘွတ်ဘွတ် ဘွတ် နဲ့အချက်၇၀ခန့်အကြာမှာမဝင်းစောက်ဖုတ်ထဲကိုတရပ်စပ်ပန်းလိုက်ပါတော့တယ်…
အီး….များလိုက်တာအရေတွေကွယ် ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့မှာ ၃နာရီခန့်ဖက်အိပ်ကာ ရေချိုးကာဦးဇေယျဆီသို့ထပြန်လာပါတော့တယ် ဦးဇေယျကိုထိုအကြောင်းပြောပြရာကောင်းတယ်ကွာ အဲလို့သာလိုးပေး မင်းကအန်တီမမ ကြိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးမှ…..မိန်းမတွေကနှစ်ဦးသဘောတူကြည်ဖြူရင်လုပ်သာလုပ် အားပေးတယ် ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်အောင်လည်းကိုယ်ဘက်ကပြင်ဆင်ထား သန့်ပြန့်နေ ဆေးလိပ်တတ်နိုင်သမျှရှောင် အဟာရဖြည့်စွတ်စာစားအားကစားးလုပ်ပေါ့ကွာ မုဒိန်းကျင့်တာ သက်ငယ်မုဒိန်း ပြီရင်ဘတ်စ်ပေါ်မှာထောက်တာအဲ့ဒါတွေသာရှောင်ကွာ လူသတ်သမားထက်မုဒိန်းသမားကရွံဖို့ကောင်းတယ် အခုခေတ်ဆိုကလေးတွေကိုမုဒိန်းကျင့်တာ သတ်ပစ်ရမှာအောက်တန်းကျတာ တို့နိုင်ငံမှာမုဒိန်းမူကိုသေဒဏ်မပေးတာတော်တော်ဆိုးတယ်ကွ…. စကားစမြည်ပြောကာ ပင်ပန်းတယ် ဦးဇေယျနားလိုက်ဦးမယ် အေး တူလေး ဒိန်ချဉ်ဝယ်သောက်ကွာ ဒိန်ချဉ်က သုတ်ရည်ပြန်ပြည့်စေတယ် ကြက်စွတ်ပြုပ်တို့ငှက်ပျောသီးသောက်အားပြန်ဖြည့်လိုက်ဦးဟေ့ မင်းမမကြီးကို နောက်တခါအဲ့ထပ်ကောင်းအောင်လိုးပေးရမှာ… ဟားး….ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ ဆိုကာအိမ်သို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်.. တနေ့ ဦးဇေယျအိမ် အနီးလက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွင်ထိုင်ကာအပျင်းပြေပြောနေခိုက် … ဦးဇေယျ မနေ့ကဦးလေးပေးလိုက်တဲ့ အောစာအုပ်မိုက်တယ်ဗျ …
စာအုပ်ထဲကအတိုင်းဗျာ အိမ်ဘေးကအပျိုကြိးအိပ်နေတုန်းတက်လိုးလိုက်လို့ကတော့အနှစ်ပဲ…. ဟ ..ဟဲ့ရောင်ရာ မင်းဝိုင်းအရိုက်ခံရမှာပေါ့ အောစာအုပ်ဆိုတာ မင်းဂွင်းထုဖို့သက်သက်ပဲ အပြင်မှာလိုက်လုပ်လို့မရဘူး သူတို့က မင်းအာသာဖြေဖို့မိန်းမမရှိတဲ့လူတွေ အိမ်ထောင်ရှိလည်းအဝေးရောက်နေတဲ့လူတွေ အာသာဖြေဖို့သက်သက်ပဲအပြင်မှာလိုက်လုပ်လို့မရဘူး အေး …အောစာအုပ်ထဲကအတိုင်း တက်လုပ် အောစာအုပ်ထဲမှာကြိုက်သွားတယ်အပြင်မှာကျအရိုက်ခံရ အရှက်ကွဲအကျိုးနည်းဖြစ်လို့အမူဖြစ်တာတွေအများကြီးပဲကွ ပြီးမှငြိမ်မခံတော့သတ်မိ ဒုစရိုက်မူတွေက အဲ့လိုဦးနှောက်မရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တာ အောစာအုပ်ကိုဂွင်းထုဖိုကသက်သက်ပဲကွမှတ်ထား….. ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ အပြင်မှာလည်းမလုပ်ပါဘူး စိတ်ကူးကြည့်တာပါ… အေး မင်း အောစာအုပ်ဖတ်လုပ်ချင် မင်း မဝင်းကိုလုပ်လေ မဝင်းကိုလုပ်တာနည်းနည်းရိုးလာလို့ဗျ အေး ဒါဆိုမင်းဖာသွားချပေါ့ကွ…. မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စော်နှင်းလေးကို ဟိုတယ်လိုက်ဖို့ညှိနေတာ သွားစားမလို့ … အေး အဆင်ပြေရင်ချပေါ့ကွ…. ဒါမယ့်ကွာ တကယ့်အပျို မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်ကိုတူတူအိပ်ပြီးယူနိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲကွာ ဘာသာရေးအရရော ယောကျာ်းတစ်ယောက်တာဝန်အနေနဲ့ရော…မင်းသွားတဲ့အခါ ချောင်းရိုက်တွေသတိထားကွာ အဲ့ဒီချောင်းရိုက်အောကားတွေပေါ်တာကြည့်ပါလားအဲ့ဒါငါတို့ကတော့ကြည့်ကောင်းတာပေါ့ကွာ ဒါမယ့် ဒါ အတွင်းရေး ချိုးဖောက်တာပဲ အဲ့ဒိခိုးရိုက်ခံရတဲ့မိန်းကလေးဘဝက အဲ့ဒီကောင်မယူရင် အရှက်ကွဲသေဖို့ပဲရှိတယ်တချို့ဖုန်းဆိုင်တွေဆို အဲ့လိုလုပ်တာတော်တော်ရိုင်းတယ်…
ဟုတ်တယ်ဗျ ဒါတော့စဉ်းစားမိတယ် ….နှင်း ကိုချစ်ပါတယ် ဟိုတယ်သွားနေပြီးယူမှာပါဗျ ယောကျာ်းတစ်ယောက်တာဝန်သိပါတယ် လောဆည်ဖာပဲသွားချမယ်ဗျ မမကြီးတွေရှိတယ် ဘိသွားမယ်…. အေးအေး ကွန်ဒုံးဆွတ်ကွာစိတ်ချရအောင်… ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ဒါနဲကျွန်တော်လည်း လိူင်သာယာမှဘိတစ်ခု သို့ သွားခဲ့ရာ ရောက်သောအခါ ဘိမှ ခေါင်းအား အန်တီ…အသက်၃၅ လောက်မရှိဘူးလား ရှိတော့ရှိတယ် ဝင်နေလားမသိ…ဒီမှာအငယ်အသစ်လေးတွေရောက်တယ်လေကွယ်…. ဟာ ကျွန်တော်မမကြီးတွေပဲ ကြိုက်တာ…..မရှိရင် အန်တီနဲ့ဝင်မယ် အမလေး မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်တော်ချောရယ် ….ကြည့်ပေးပါ့မယ် ဟေ့…..အေးအေး ရှိလားခေါ်လိုက်ပါဦး……. လာပြီ လာပြီ အမ အသံကြားရာဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဝါဝါအောင်ကိုယ်လုံးနဲ့ အသားညှိညှိ နဲအသက်၃၅နှစ်ခန့်မိန်းမတစ်ယောက်ထွက်လာပြီး….. အေးရေ ..ဒီမှာဧည်သည်လိုက်သွားလိုက်ပါဦး…… ဟုတ် ဟုတ်….. ဟေ့ မောင်လေး ပိုက်ဆံကတော့ ၁နာရီ ၂သောင်းဘယ်လိုလဲ ဝင်မယ်ဗျာ ရော့ ၄သောင်း ၂နာရီ…….. ထို့နောက်မအေးနောက်သို့လိုက်ကာ မအေးမှာဖာသည်မတိုထုံးစံအတိုင်းပေါင်ဖြဲကားမပေးဘဲ ထိုင်နေသောကြောင့် အမ ဘာလို့လဲ မောင်လေး အမက စဝင်တာဒီနေ့မှ စီးပွားရေးတော်တော်ကြပ်တည်းနေလို့ နေရတာစိတ်ပါလို့ လူရွေးပြီးဝင်တာမောင်လေးကိုမြင်တော့ သန့်သန့်မို့လို့….နည်းနည်းတော့ရှက်တယ် ကြိုက်တယ်ဗျာ ဒါမျိးဆိုကာ မအေးကိုသိုင်းဖက်ကာ နမ်းရူပ်မိတော့တယ်… ရွတ် ရွတ် အယ် အရမ်းပဲ ကောင်လေး ကြမ်းတာ… ထို့နောက်မအေးရဲ့နို့ကိုစုပ်နယ်ကာ….မမ မူတ်ပေးပါလား… ကွန်ဒုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးနော် အင်းပါ ကွယ် မျက်စောင်းထိုးလေးထုတ်ကာ ပလွေအစွမ်းပြပါတော့တယ်
အား…အူး…အားးး ပြွတ် ပလွတ် ပြွတ်…..ပြွတ် အူးးးး ကောင်းလိုက်တာဗျာ နွေးနေတာပဲ …..ပြွတ် အူးး… ထို့နောက် မအေးချွတ်ဗျာ အရင်တုန်းကဖာချရင်တခါမှတော့မမူတ်ဘူး အခုမူတ်ပြီ…မအေးထဘီကိုလှန်ကာ မူတ်ပေးပါတော့တယ် …မအေးစောက်ဖုတ်မှာနံစော်မနေဘဲ အဖုတ်နံသင်းသင်းနဲ့မူတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ယက်ပေးနေပါတော့တယ်….. မအေးမှာလည်း ကျွန်တော်ခေါင်းကိုစွတ်ဖိကာ ဖီးတက်နေပါတော့တယ် အီးးးး အီးးးးပြွတ် လီးစုတ်သံ ယက်သံတွေနဲ့တဏှာဇောထနေပါတော့တယ်…..ပလပ် ပလပ် ပလပ် ထို့နောက်မအေးမှာ မောင်လေး နေတော့ဆိုကာ ကွန်ဒုံးစွတ်ပေးပါတော့တယ် မအေးဖြဲကာ ကုတင်ပေါ်အိပ်ပေးသောအခါ အီး..လီးကိုထိုးထည့်လိုက်သောအခါ သိပ်ချောင်မနေဘဲ…အား..အား… ကြပ်တယ်ဗျာ အားးးးလီးကိုအဆုံးထိထိုးထည့်ကာနှစ်ဥိးသားကစ်ဆင်ရိုက်ကာ…. ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဘွတ် အွတ် အအအအ ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အအအ အားး အား… အားးးးးးးးးကောင်းတယ်မောင်လေး ချ မညှာနဲ့ အွတ် ဖွတ် ဖွတ် လှေကြီးထိုးနဲ့အချက်၁၀၀လောက်ဆောင့်မောလာသောအခါ…….. မောင်လေး မမ တက်ဆောင့်ပေးမယ်…. ကျွန်တော်လီးပေါ် ထိုင်ချကာမြင်းစီးပေးပါတော့တယ် …
အီးးးးအီးးး အအအ အအအ လီးကိုအဖုတ်ထဲထည့်ကာမွှေပေးလိုက်ဆောင့်ပေးလိုက်နဲ့ …အ အားးးးတဏှာထန်တဲ့အမျိုးအစားထဲကဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်…အီးးးအားးးးးးးမောင်လေး အောက်ကဆောင့် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် အအအအအ အား..ဆိုကာမအေးကောကျွန်တော်ကောပြီးကာမအေးမှာ ကျွန်တော်ပေါ်မှောက်ကျသွားပါတော့တယ်…… ခဏအကြာမအေးမှာ ကွန်ဒုံးကိုချွတ်ကာသန့်စင်ပေးပြီးဘေးမှလာလှဲအိပ်လိုက်ပါတယ် အမ ကထန်တယ်နော် ဟုတ်တယ်မောင်လေး သက်သက်နေလည်းနေချင်လို့ လာလုပ်တာ ကျွန်တော်တော့တန်သွားပြီ အချိန်ကျန်သေးတယ် နောက်၁ချီနေဦးမယ်နော်… အင်းပါ…(မျက်စောင်းလေးထိုးလျက်) သူလည်းသိပ်ထန်တာပဲ မူတ်တာ အုံလိုက်ကျွတ်ထွက်သွားမလားအောင့်မေ့တယ်…. ထို့နောက်အမောပြေသောအခါ မအေး ကုန်းဗျာ ဖင်ဖူးခေါင်းထောင် လိုးခွဲမယ် အမလေးဖြေးဖြေးလုပ်ပါ တော်လေးရယ်…. ထို့နောက်ဖင်ဖူးခေါင်ထောင် စောက်ဖုတ်အုံပြူထွက်လာတာကို လိုးချင်စိတ်ထလာကာ …လီးကိုစိုက်ကာထိုးထည်လိုက်ပါတော့တယ်… အီး….ဖြည်းဖြည်း…အီးး ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် အအအအ အအအ အအ အးး အွတ် အွတ် ဖွတ်ဘွတ် ကျွတ်ကျွတ် အမလေးလေး ဖတ်ဖတ်မအေးကိုတရပ်စပ်ဆက်တက်ကျုံးပါတော့တယ်…
မအေးကညည်းလည်းညည်း အော်လည်းအော် ကျွန်တော်လည်း လီးမှာကျပ်၍အရသာအလွန်ကောင်းကာ ခဏအကြာမှာပြီးချင်လာ၍ မောင်လေး လာလာ မျက်နှာပေါ်ပန်း ဆိုသောကြောင့် ၂၀ချက်ခန့်ဆက်တိုက် အအအ ဖတ် ဖတ် ဖတ်အအွတ် အွတ်အအ ဆောင့်ကာလီးကိုထုတ်ကာမျက်နှာပေါ်ပန်းလိုက်ပါတော့တယ်… နှစ်ယောက်ဖက်ကာမှိန်းနေခိုက် အချိန်စေ့ပြီဆိုသောကြောင့် နှစ်ယောက်ကစ်ဆင်ရိုက်ကာ အပြန်အလှန်မခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကိုင်ပွတ်သက်နေကာ နောက်တစ်ခါလာပြော၍ ဘောက်ဆူးး ၅၀၀၀ပေးကာပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်….. ထိုအကြောင်းဦးဇေယျ ပြောသောအခါ ဟဟဟ ကောင်းတယ်ကွာ ကောင်းတယ်ဖာသည်မချတာ ပိုက်ဆံပေးချတာပဲကွာ သူလည်းအဆင်ပြေ ကိုယ်လည်းကောင်းပေါ့ တကယ်သာမာန်အပျိုလေးတွေကိုလိုးချင်ရုံသက်သက်နဲ့ ချစ်ဟန်ဆောင်တာထက်စာရင် မင်းအများကြီးတော်တယ်….အေး ငါ့ကောင်ဘဝအတွက်လည်းလုပ်ဦးကွာ ဆက်စ် ဆိုတာကောင်းတဲ့အရာပဲ အဲ့စိတ်အရမ်းများသွားရင်လည်းမကောင်းဘူး အောကားအရမ်းမကြည့်နဲ့ကွာအားကုန်တာပေါ့ ..စိတ်ထနေတဲ့အချိန်သာကြည့် အာသာဖြေပေါ့ကွာ ဟုတ်ပြီလား ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ ကျွန်တော်ဦးဇေယျပြောတာမှတ်ထားပါတယ်….. အေးကွာ …ပြန်တော့ ငါ့ကောင်.. (ပြီးပါပြီ)